4% ပွင့်လင်းမှုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် 4% ပွင့်လင်းမြင်သာသောစက်ရုံ
သြစတြေးလျ Polyester နှင့် Vinyl PVC Polyester Sunscreen အထည်
ကောင်းမွန်စွာ insulator တွင်ထားသောအရိပ်ထုတ်ကုန်များသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသုံးပြုသူများသည်အခန်းအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လေအေးပေးစက်သို့မဟုတ်အပူကိုအားမကိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင်အပူကုန်ကျမှုကို ၄၉% အထိသက်သာစေနိုင်သည်။ နွေရာသီတွင်ရေခဲသေတ္တာကုန်ကျစရိတ်၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
China Roller Shades သည် Venetian Vision Combi မျက်စိကန်းသောအစိတ်အပိုင်းအစိတ်အပိုင်းကုလားကာများကိုအပြီးသတ်ထားသည်
Sunscreen Blind Shade Fabric အတွက်အရောင်အသိပညာ
မိသားစုအလှဆင်ခြင်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအသိပညာရှိပါသည်။ အိပ်ခန်းအလှဆင်ခြင်း၏အရောင်သည်ပိုမိုပူနွေးပါကခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အကယ်၍ လေ့လာမှုကိုအပြာရောင်ဖြင့်အလှဆင်ထားသည်ဆိုပါက၎င်းသည်လူတို့အားသင်ယူခြင်းနှင့်သုတေသနပြုခြင်းများကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်စေသည်။ စားသောက်ဆိုင်၌အနီရောင်နှင့်အညိုရောင်စားပွဲသည်စားချင်စိတ်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ထို့ကြောင့်အရောင်ကိုက်ညီမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အထဲတွင်မူလတန်းကျောင်းမေးခွန်းများအများကြီးရှိပါတယ်!
Roller Blinds for Windows Components for China Waterproof Curtain Sunscreen Shade Fabrics
လူ့ရုပ်ပစ္စည်းဘဝနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအသက်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် roller blinds များအတွက်အထည်အရောင်များသည်မှော်အတတ်နှင့်အမြဲအရောင်တောက်သည်။ လူများသည်ရောင်စုံအရောင်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်းနှင့်တန်ဖိုးထားရုံတင်မကမျက်ခုံးအရောင်များကိုနားလည်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
roller blind အစိတ်အပိုင်းများအထည်များသည်အရောင်များကိုကောင်းစွာအသုံးပြုသည်။ ရေစိုခံအရောင်များ၊ လျှော်၊ gradient၊ jacquard နှင့်အခြားအရောင်များရှိသောရေစိုခံ roller blinds များသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အရိပ်အထည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Roller Blind အတွက် Window Blinds မျက်နှာပြင် Sunscreen Sun Solar Cell အထည်
Shutter Window မျက်စိကန်းသော
သဘာဝတရားသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနာ၏နာမည်နှင့်ထိုက်တန်သည်။ ရိုးရှင်းသောအဓိကအရောင်သုံးမျိုးဖြင့်နွေရာသီတွင်အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်၊ နွေရာသီတွင်ရောင်စုံ၊ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်အနီရောင်မေပယ်နှင့်ဆောင်းတွင်း၌ငွေကဲ့သို့သောထောင်ပေါင်းများစွာသောအရောင်များကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအရောင်ထူးခြားတဲ့ကျက်သရေရှိပါတယ်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုအားစိုက်ထုတ်မှု၏ထက်ဝက်နှင့်နှစ်ဆလိမ့်မည်။ နူးညံ့သောအ ၀ တ်အစားအမျိုးမျိုး၏အရောင်ကိုက်ညီသောစွမ်းရည်ကိုသင်မည်မျှကျွမ်းကျင်ပြီးပြီနည်း။ ဒီနေ့ Groupeve အကြောင်းပြောမယ်!
မီးခိုးရောင်လက်စွဲ Living ည့်ခန်း ၂၅mm ဗီနိုင်းဗင်းနစ် Venetian Korea Shutter Window Roller Blind
နေကာကွယ်ခြင်းနှင့်အပူကာကွယ်ခြင်းအတွက်ကာစရာကုလားကာသည်အများအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသောထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုလားကာအမျိုးပေါင်းများစွာရှိပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်အပူကာကွယ်နိုင်မှုတို့တွင် ၄ င်းတို့၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ နေရောင်ကာခံခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများပါသည့်ပိုထူ။ မှောင်သောကုလားကာများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အထည်ကုလားကာ။ အရောင်ပိုမိုထူပြီးမဲမှောင်လာလေလေအရိပ်နှင့်အပူလျှပ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းလေဖြစ်ပြီးချည်မျှင်နှင့်လျှော်ပစ္စည်းများသည်ပိုမိုရှူရှိုက်နိုင်သောလေဖြစ်သည်။ သငျသညျခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုနှင့်အတူပစ္စည်းများရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မူလကန့်လန့်ကာကိုမပြောင်းလိုပါကထည်ကုလားကာနှင့်ပိတ်ကျဲစကုလားကာအကြားတွင်အရိပ်အထပ်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။